Duqa Muqdisho oo daah furay qorshaha horumarinta Qaranka ee Sagaalaad – Hornafrik Media Network
Muqdisho (Hornafrik)—- Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa daah furay Wadatashiga Qorshaha horumarinta Qaranka ee sagaalaad oo lagu qabtay Xarunta D/Hoose ee Muqdisho, si maamulka Gobolka Banaadir ugu darsardo wixii talo iyo tusaale ah.
Guddoomiye Eng. Yarisow ayaa sheegaay in maamulka Gobolka Banaadir uu ahmiyad gaar ah siinayo qorshaha horumarinta Qaranka, bacdamaa bulshada Caasimaddu ay waligood u taagnaayeen midniada, wadajirka iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed.
Duqa Muqdisho ayaa balan-qaaday ka maamul ahaan in kaalintooda ay ka qaadanayaan sidii uu qorshahani u noqon lahaa mid taabagal ah, kuna dhisan aragtida iyo baahida bulshada Soomaaliyeed.
Sidoo kale, Guddoomiyaha ayaa uga mahadceliyey Wasaaradda Qorshaynta, Maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha, sida ay uga go’an tahay in qorshahan lagu saleeyo rayiga qeybaha bulshada ee kala duwan, iyadoo wadatashiyadan lagu soo qabtay gobolada dalka.
Qorshaha Horumarinta Qaranka ayaa arrimaha ugu waaweyn ee uu diiradda saarayo waxaa ka mid ah dhimista fakhriga, dib u habeynta kaabeyaasha dhaqaalaha, tayeynta hay’adaha dawliga , hirgelinta nidaam siyaasadeed loo dhan yahay xoojinta sharciga, garsoorka iyo amniga.